(၂၇) ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများ၏ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးများသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း တက်ရောက် | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Published: Thu, 11/11/2021 - 18:33 Posted Under: ဝန်ကြီးရုံး Place: နေပြည်တော်
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ (၁၁)
(၂၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် ဦးဆောင်၍ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်အတူ အာဆီယံ- တရုတ် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများအစည်း အဝေးနှင့် US-ASEAN Business Council (US-ABC) ဆွေးနွေးပွဲတို့ကိုလည်း တစ်ဆက်တည်းကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးများသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၁၀)နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် US-ABC မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း ဦးဆောင် သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ (၂၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။
ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ Ministry of Public Works and Transport မှ ဝန်ကြီး H.E. Mr. SUN Chanthol က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များအတိုင်း ကျင်းပရာ တက်ရောက်လာသော ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးများက “အာဆီယံ ကွာလာလမ်ပူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၅) တွင်ပါဝင်သော ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအသီးသီး၏ နိုင်ငံအလိုက်နှင့် ဒေသတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများ၊ အာဆီယံ၏ တစ်ခုတည်းသော လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူ-ကူမင်းရထားလမ်း စီမံကိန်း၊ အာဆီယံအဝေးပြေးလမ်းကွန်ရက်နှင့် အာဆီယံပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး မူဘောင် များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုများ၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကို Digital စနစ်သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရေးကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား ပို့ဆောင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ” စသည်တို့ကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် အနာဂတ်တွင် ဒေသတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင် Digital စနစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုရေး” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံအလိုက် ဆွေးနွေးရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက “မြန်မာ နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးကို အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရသည့်အတွက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး တွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများနှင့် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားရန်အတွက် Digital စနစ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန်လိုအပ်လာကြောင်း” ဆွေးနွေးပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က “လက်ရှိပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် IT အသုံးပြုမှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း National Portal နှင့် Data Centre တည်ဆောက်ခြင်း၊ e-Government Master Plan ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ကာလရေးဆွဲခြင်းနှင့် အမျိုးသားအဆင့် Intelligent Transport System (ITS) Master Plan ရေးဆွဲရေး စသော IT အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချမှတ်ထား သည့် ဦးတည်ချက်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအခြေခံပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန် အဟုန်မပျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဒေသတွင်းရေရှည်တည်တံ့သည့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင် Digital စနစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း” တို့အား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး နှင့် အာဆီယံ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများနှင့် US-ASEAN Business Council ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ပထမနေ့အစီအစဉ်များကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဂျပန် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုရီးယားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများနှင့် ဆွေးနွေးဘက်နိုင်ငံများ/ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ အထူးအစည်းအဝေးများကို ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းရရှိပါ သည်။
Published: Sun, 11/28/2021 - 09:24